HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER 1-1-2020
Wednesday January 01, 2020 - 10:10:49 in Wararka by Mogadishu Times
Labada gole oo ansixiyay Miisaaniyada sanadka 2020 Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Aqa lka Sare ayaa kulan ay yeesheen wa xa ay Shalay ku ansixiyeen Miisaaniyad da Sanad ka 2020. 188 Xildhibaan ayaa ogolaa tay ansixinta Miisaaniyadda Sanadk
Labada gole oo ansixiyay Miisaaniyada sanadka 2020 Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Aqa lka Sare ayaa kulan ay yeesheen wa xa ay Shalay ku ansixiyeen Miisaaniyad da Sanad ka 2020. 188 Xildhibaan ayaa ogolaa tay ansixinta Miisaaniyadda Sanadka 2020 , hal xildhibaan ayaa diiday halka ay labo xi ldhibaan oo kalena ka aamuseen Wasiirka Maaliyada XFS Md. C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa horgeeyay sharcigan Golaha Sharci dajinta ee labada aqal. Miisaaniyadda sanadka 2020 ayaa gaarey sa $459.5 Milyan, waxaana kala bar lacagta as ay tahay deeqaha dibadda ka imaanaya ee dowladaha iyo Hey'addaha deeq bixiyeya asha ay ku kabayaan Miisaaniyadda DF. Ansixinta miisaaniyaddaan ee Labada Aq al ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa maalintii ugu dambaysay sanadka 2019, si sanadka 2020 oo berri ka bilaabanaya loogu shaqeeyo miisaaniyadda cusub. Waa markii ugu horeysay ee ay 2da gole si wadajir u ansixiyeen miisaaniyada, iy adoo hore golaha Shacabka oo kaliya u ansixiyeen miisaaniyada.
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay miisa aniyadda Dowladda ee 2020
Madaxweynaha JFS Md.M.C/hi Farmaajo ayaa saxiixay miisaaniyadda Dowladda ee sanadka 2020-ka, ka dib markii ay ansixiye en B/F/Soomaaliya. Madaxwenaha ayaa ku bogaadiyey Xildhi baannada 2Gole oo wadajir u ansixiyey mii saaniyaddan sida xilkasni mada leh ee ay u guteen waajibaad ka dast uuriga ah ee kaga aaddanaa, iyagoo na ku ansixiyey cod aqlabiyad leh.
Madaxweyne Farmaajo oo dul-istaagay kororka miisaaniyadda DFS ayaa faray Xuk uumadda in ay xoogga saarto dardargelinta adeegyada bulshada, kobcinta fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xaqiijinta musha araadka shaqaalaha Dowladda iyo Ciidama da Qalabka Sida.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa adkeey ey qorsheyaasha heer Qaran ee lagu wajah ayo musuqmaasuqa iyo dadaalka xooggan ee shacabka iyo dowladdu Soomaaliyeed ay ugu jiraan hirgelinta hannaan maaliyadeed oo hufan. Madaxweyne i Farmaajo ayaa uga mahadceliyey W/Maaliyadda DFS iyo dhaqaalyahannada Soomaaliyeed diyaarin ta iyo jaangoynta miisaaniyad waxtar u leh dadka iyo dalka.
Wasiirka Warfaafinta: Badeena sun ayaa lagu shubay
Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xa yir Maareeye, ayaa xe ebta Muqdisho wuxuu ku soo arkay arrin uu la yaabay, kadib markii Shalay isaga & Xildhibaan Cali Ganey ay tag een. Wasiir Maareeye oo muuqaal kooban oo Baraha Bulshada la soo galiyay ka duubay xeebta ayaa shee gay in malaaygii yar yaraa ee badda ku jiray xeebta uu buuxo isaga oo dhintay.
Waxa uu sheegay arrintaasi inay muuji nayso sun lagu shubay badda, maadaama malaay ga uu dhintay isaga oo fara badana uu buu xo Xeebta Afaafkeeda hore.
"Shalay aniga Xildhibaan Cali Ganey oo xooggaa Jimicsi ah u tagnay badda, ayaan waxaan ku soo aragnay arrin lala yaabo oo ah malaaygii yar yaraa ee dhalanaayay oo isaga oo dhintay Banaanka u soo baxay, r untii waa nasiibdaro wayn in badeena sun la gu shubo oo malaayga sidaasi u soo baxo.” Ay uu yiri Wasiir Maareeye.
Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay dowl adda Somaliya inuu la wadaagi doono arrin taasi una gudbin doono muuqaalka ay duu been si madaxda Qaranka arrintaasi loola so codsiiyo. Xeebaha Somaliya ayaa markii ho reba waxaa si sharcidaro uga kalluumeysan jiray maraakiib Shisheeye, sidoo kalena sunta & qashinka isaga soo daadin jiray.
Maamulka Gobolka Banaadir oo dibadbax iclaamiyey
Maamulka G/Banaadir ayaa waxaa uu icla amiyey in Maalinta Khamiisto ah ee soo soc ota uu M/Muqdisho ka dhaco banaanbax loo ga soo horjeedo Al-Shabaab.
Maamulka G/Banaadir ayaa sheegay in banaanbaxaas uu noqon midweyn ioo Shac abka Muqdisho ku muujinaayan midnimadooda iyo in meel loogu soo wada jeesto Al-Shabaab., Maamulka G/Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in Al—Shabaab dhi baato ku hayaan Shacabka Gobolkan Bana adir,isla markaana Shacabka looga baahan yahay inay ka dhiidhiyaan.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyad da qarax ay ku dhinteen dad u badan Sha cab oo Sabtidii 7aadkaan ka dhacay Isgoys ka Ex-koontorool Afgooye ee Muqdisho, iy aga oo tacsi u direy dadkii ku dhintey.
Duqeyn Diyaaradeed Oo Ka Dhacday Deegaan Ka Tirsan Gobolka Bari
deegaano ka tirsan Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in halkasi ay ka dhacday du qeyn diyaradeed oo khasaare geysatay.
Dadka deegaaka ayaa sheegay in Fidkii hore ee Habeen hore a duqeyni ka dhacday Buuraleyda Calmadow ee Gobolka Bari oo ay ku sugnayeen Alshabaab isla markaana ay maqlayeen jug culus oo dhacaysay.
Duqeyntaan ayaa ka dhacday deegaan Madarshaan oo ku yaalla dhulka buuralayda ah ee gobolka Bari ee Puntland isla markaa na dhowr KM u jira M/Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warar soo baxaya ayaa sheeg aya in duqeyntaas lagu dilay xubno ka tirsan Alshabaab oo ku sugnaa deegaanka Mada rshaan in kasta oo ilaa iyo haatan aysan jirin cid xaqiijin karta khasaaraha ras miga ah ee k a dhashay duqeyntas. Duqeyntaan ayaa ku soo adeysa kadib mar kii Dorraad ciida mo ka tirsan maamulka Puntland qarax Miino lagula eegsaday nawa axiga dhulka Buuralayda ah xili ay ku socdaalayeen gaad iid nooca dagaalka ah.
Madaxweynaha Cuba oo Taleefoonka kula hadlay Farmaajo & Uhuru Kenyatta
Madaxweynaha dalka Cuba, ayaa sheeg ay wada hadal qadka taleefoon ka inuu kula yeeshay Madaxw eynayaasha Somaliya & Ken ya Madaxweynaha dalka Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayaa si way n uga walaacsan xa aladda ay ku sugan yih iin dhaqaatiir u dhalatay dalkaasi oo Shaba ab ay gacanta ku hay aan.
Qoraal uu ku daabacay Boggiisa Twitte r ka Shalay oo Talaado ah wax aa uu ku sheegay in 2da Mad axweyne uu ka wareystay xaa ladda ay ku sugan yihiin Dhaq aatiirta 2da ah ee u dhashay Dalka Cuba kuwaas oo laga qa faashay gudaha Kenya laguna ha yo gudaha Soomaaliya.isagoo intaa ku daray in 2da Ma daxweyne uu kala hadlay si dii 2daas dhaq tar iyaga oo badqaba ay dib u gu laaban lah aayeen dalalkooda.
Dhaqaatiirtaasi u dhalatay dalka Cuba, ay aa laga afduubtay aaga M/Mandhera Bi shii April ee sanadkaankii.tagay
Al- Shabaab oo dhaqaatiirtaasi gacanta ku haayo, ayaa waxa ay dalbadeen madax fura sho sida laga soo xigtay Odayaasha G/W aqooyi Bari oo Shabaab wada hadalka dhaq aatiirtaan ugu tagay.
C/qaasim oo ka hadlay qarixii Muqdisho baaqna u direy Dowladda
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Ca bdi Qaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay khasaaraha ka dhash ay qarixii ismiidaaminta ahaa ee 28-kii Bisha an December ka dhacay Isgoyska Ex-Koon torool Afgooye ee Magaalada muqdisho.
Waxaa uu sheegay in musiibooyinka iyo qar axyada dalka ka dhacaa yo ay yihiin kuwo horey u soo jirey,isla markaana ay yihiin kuwo dadka Sooma aliyeed ay gacantooda ku kasbadeen.
Madaxda dowladda Soomaaliya iyo Shac abka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay gacmaha is qabsadaan si looga baxo dhibaa tada dhinac walba ka heysato dadka Sooma aliyeed. Qarixii dhawaan ka dhacay isgoys ka Ex-koontorool Afgooye ee Magaalada mu qdisho ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku ge eriyoodeen in ka badan 100 Ruux tira intaasi kasii badana ay ku dhaawacmeen,waxaana mas’uuliyada qaraxaas sheegtay Al-Shabab.
Is-baheysi ka dhan ah dhismaha Galmu dug oo bilaawday
Madaxweynaha maamulka Puntland Sac iid Cabdullaahi Dani iyo hoggaamiyaha Ah lu-Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sh.Xasan Faarax, ayaa la sheegay in 7aadk an ay kulan qarsoodi ah ku yeesheen M/Gar owe ee xarunta maamulka Puntland.
Xogta aan ka helnay kulankaas waxay sheegeysaa inay 2daas masuul ku heshiiy een in la fashiliyo doorashada ay XFS gar-wadeenka ka Tahay ee lagu wado inay ka dhacdo Galmudug.
Ila wareedyo aad ugu dhaw-dhaw dhina cyadaas ayaa noo sheegay in kulankaas oo saacado badan qaatay uu Madaxtooyada Garowe ka dhacay 7aadkan, kadib markii Macallin Maxamuud uu safar qarsoodi ah ku tagay Garowe.
Qodobada lagu lafa guray kulankaas ay aa kala ahaa, in la fashiliyo qabsoomidda do orashada Galmudug ee xukuumaddu ay dab ada ka riixeyso iyo in la sameeyo isbaheysi ka dhan ah madaxda haatan hoggaamisa DF Khayre iyo Farmaajo, kaas oo ku wajah an doorashooyinka federaalka ee 2020/ 2021-ka, sida aan ku helnay xogta .
Intii ay socdeen kulamadaas ayey dhina cyadu ka arinsadeen tallaabooyinka ay tah ay in la qaado, si loo cuuryaamiyo doorasha da Galmudug ee xukuumadda federaalku ay ka waddo Dhuusamareeb.
Dani iyo Macalin Maxamuud ayaa gaba-gabadii kulankooda ku heshiiyey in Ahlu-Sun na qaadacdo nidaamka doorasho ee Galm udug uu ka wado Ra’iisul Wasaare Kheyre, doodeeda 1aadna ay ka dhigto in dadka reer Galmudug loo madax-baneeyo masiirkooda, fursadna loo siiyo inay iyagu maamul soo dhistaan. Sidoo kale Madaxweyne Dani ay aa Macallin Maxamuud u soo bandhigay is baheysi siyaasadeed oo dhawaan ay aas-aaseen Dani iyo Senetor Cumar Cabdirash iid Cali Sharma’arke oo maalmo ka hor teg ay Garowe.
Isbaheysigaas oo ay ku mideysanyihiin madaxda maamulada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiin iyo xisbiyo siyaasadeed oo ka le ayaa lagu daray hoggaamiyaha Ahlu-Sun na Macalin Maxamuud Sh.Xasan, waxuuna u jeedka is-baheysigaasi ku wajahanyahay doorashada dalka ka dhici doonta sanadka 2020/2021-ka.
Is-baheysigaas cusub ayaa la sheegay in uu si weyn uga soo hor jeedo in doorashada Galmudug ay uu ku soo baxo musharax ay wataan madaxda dowladda federaalka
Mareykanka oo sheegay weeraradii ugu badnaay sanadkaan inuu ka fuliyay Somaliya
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ay sa nadka 2019 Soomaaliya ka fulisay Weerarra dii ugu badnaa ee ay sanadgudihiis ka fuliso Soomaaliya.
2019 Mareykanka waxaa uu Soomaaliya ka fuliyay 63 weerar oo dhanka Cirka ah ku waas oo lagu beegsaday Ururrada Al-shaba ab iyo Daacish ee ka dagaallama Sooma aliya. Weerarradii ugu dambeeyay waxaa uu Al-shabaab Axaddii todobaadkan ka fuliyay G/Shabeellaha hoose halkaas oo uu sheeg ay in uu ku dilay 4 xubnood oo ka mid ah AL-shabaab kuna gubay laba Gaari.
Mareykanku ma sheegin khasaaraha gu ud ee 63 weerar ka dhashay sanadkan 2019 hayeeshee hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka in uu dad rayid ah ku laayo islamarkaana qari yo khasaaraha rayidka.
Sanadkii 2018 Mareykanka waxaa uu Soomaaliya ka fuliyay 47 Weerar halka 2017 uu ka fuliyay 35 Weerar, laakiin Sanadkan 2019 ayey Weerarrada ka sii sara mareen 2da sano ee ka horreeyay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Tr ump ayaa markii uu la wareegay talada Wad danka Mareykanka waxaa uu amray kordhi nta weerarrada ka dhanka ah AL-shabaab iyo Daacish ee ka socda Soomaaliya.
Wararkii ugu danbeeyey kulamo RW Kheyre uu ka bilaabay Dhuusamareeb
R/Wasaaraha XFS Xasan Cali Kheyre oo ku sugan M/Dhuusamareeb ee gobolka Gal gaduud ayaa Shalay waxaa uu kulamo ka bilaabay magaaladaas.
Wararka ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasa are Kheyre uu kulamo la qaadan doono gud diga farsamada iyo dhismaha ma amulka Gal mud ug, hoggaanka sa re ee Ahlu-Sunna, waxgaradka iyo q eybaha kala duwan buls hada ku nool maga alada Dhuusamareeb.
Kheyre ayaa waxaa uu kala hadli doon aa dhinacyada uu kulamada la qaadanayo, sidoo loo bilaabi lahaa soo xulista xildhib aa nada cusub ee baarlamaanka Galmudug iyo sida ugu haboon ee loo sii amba qaadi karo howlaha doorasho ee maamulka Gal mud ug,
Sidoo kale madaxa xukuumadda Galm udug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre, ayuu hadda kul an uga socdaa xarunta guriga gobolka ee M/ Dhuusamareeb oo uu deganyahay Kheyre, mana jirto cid ku wehlisa laba masuul kulan kaas sida ay noo xaqiijiyeen ilo aad ugu dhaw. Caqabado dhowr ayaa horyaalla soo xul idda Baarlamaanka labaad ee Galmu dug, waxaana markii labaad dhaqan gali waayey jadwallo uu soo saaray guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug, waxaana how sha dhismaha maamulka oo ka bilaabanay say soo xulidda baarlamaanka haatan laga hayaa oo kaliya 20-kii xildhibaan oo ay soo xushay Ahlu-Sunna, kuwaas oo aan wali la isla ogolaan.
Is qab qabsi xoog leh ayaa ka dhex-jira beelaha qaar oo ku saabsan xulista xildhib aannada,waxaana jira beelaha qaar oo ku doodaya in xubnihii ay ku lahaayeen baarl amaanka Galmudug laga siiyey Ahlu-Sunna WalJamaaca.
R/Wasaare Kheyre ayaa M/ Dhuusamar eeb u yimid sidii uu xalin lahaa tabashoyin ka ka dhashay soo xulista baarlamaanka Galmudug iyo dib u dhaca doorashada maa mulka, waxaana lagu wadaa markii xal laga gaaro tabashooyinkaas in la guda galo do orashada maamulka oo ka dhici doonta M/Dhuusamareeb.
Maxkamada Ciidamada oo 9 ruux xuku no dil iyo xabsi isugu jira ku ridey
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciida mada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xu kunno kala duwan ku ridday 9 eedeysane oo lagu eedeeyay in ay dilal ka geysteen Muqd isho iyo in ay ka tirsanaayeen dagaalamay aasha Al shabaab.
Dadka xukunada lagu ridey oo mid ka mid ah waxa ay tahay dumar iyadoo qaar kalana lagu ridey iyagoo maqan. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee CQS G/dhe xe Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaq ay Xukunnada kala duwan oo kala ah ayaa sheegay in Saalim Siciid Maxamed, Maxamed Xaaji Axme d,Axmed Maxamed Haashim oo maxkam adda joogay lagu xuk umay dil toogasho ah.
Sidoo kale Sharma’arke Cumar Axmed, Axmed Faarax Iidle, C/Raxmaan Sh.C/hi, Ra madaan C/Rixiin Mursal oo maxkamadda ka maqan ayaa lagu xukumay dil toogasho ah.
Ugu dambeyntii waxa ay maxkamadu ku xukuntay 15 sano oo xarig ah Faadumo Xus een Cali Caddaawe oo maxkamadda joogt ay halka C/Naasir Axmed C/qaadir oo max kamadda ka maqan lagu xukumay xabsi daa ’in. Eedaysanayaashaan ayaa Maxkamada Ciidanka qalabka sida ku eedaysay dilal qo rshayn oo loo gaystay Nabadoono ,Saraakiil
Boolis iyo mas’uuliyiin ka tirsan DFS.
Safiirka Imaaradka ee Somalia & Wakiil QM oo Muqdisho ku kulmay
M/Muqdisho waxaa kulan gaar ah ku ye eshay Safiirka Imaaraadka Carabta ee Soo maaliya Maxamed Axmed Cusmaan Xamaa da oo maalmihii la soo dhaafy ku sugnaa Mu qdisho iyo Wakiilka QM ee Soomaaliya Am b, James Swan.
Qoraal lagu daabacay Barta twitter-ka Safaaradda Imaaraa dka Carabta ee Muq disho ayaa lagu soo bandhigey kulankaas labada dhinac,hayee shee aan lagu faah fa ahin waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Safiirka Imaaraadka Carabta oo todobaadya dii la soo dhaafy ku sugnaa Muqdisho wax aa uu dhawaan la kulmay Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Caw ad,waxaana la filayaa in Maalmaha soo soc da uu la kulmo madax kale.
Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xilligaan xiriirkooda waxaa uu yahay mid hoos u dhacay tan iyo markii uu xumaaday,kadib markii Dowladda Soomaal iya ay Garoonka Muqdisho ku qabatay lacag dhan 10 Milyan oo Dollar oo laga lahaa Ima araadka.
Waxaa sidoo kale Baarlamaanka Soom aaliya ay cod u qaadeen qodob ku saabsa naa in dalka laga saaro Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ka caawin jirtay dhinaca tab abarada Ciidamada.
Madaxweynaha Puntland oo laba arrimo od u tegaya Boosaaso
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maa lmaha soo socda waxaa la filayaa in uu tago Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari iyo deegaano kale oo ka tirsan Punt land. Siciid Deni oo haatan ku sugan garo owe ayaa safarkiisa Boosaaso,kaddib wax aa la flayaa in uu tago Gobolka ay puntland u taqaano Gardafuu,waxaana socdaalkiisa uu ku qotomaa laba arrimood oo kala ah.
1: Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo bilihii la soo dhaafay ay ka jirtay xaalad Amni darro in uu kala Shiro saraakiisha Amniga iyo in la bilaabo fulinta mashaariic iyo qod obo kale.
2: Safarkiisa uu ku tagayo Gobolka ay pun tland u taqaano Gardafuu ayaa waxaa uu aa dan yahay in gobolkaas uu xilligaan Go’doon ku jiro,kaddib markii wadooyinkii soo galay ay uu Roobka jarey in uu tuso indhaha Caa lamka si loogu soo gurmado wadatashiyo kalena uu la yeesho Maamulka iyo qeybaha Bulshada. Madaxweynaha Puntland Siciid C/hi Deni ayaa horey u sheegay in Puntland ay dagaal kula jirto Xubno ay ka mid yihiin Kooxda Daacish oo mararka qaar falal amni darro ka geysata qeybo kamid ah gobolka Bari.
Wararkii ugu dambeeyay Mooshin xilka qaadis ah oo laga Gudbiyay Madaxweyne Waare
In ka badan 40 xildhibaan oo ka tirsan ba arlaamanka maamulka Hirshabeelle ayaa Madaxweynaha maamulkaasi ka gudbiyay Mooshin xilka qaadis ah sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maam ulkaasi.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa Risaala u xaqiijiyay in Mo oshinkaan dhawaan loo gudbiyay Guddoon ka baarlamaanka Hirshabeelle. Waxa ay she egeen in Guddoonka baarlamaanka ay ka dalbanayaan in uu fadhiisiyo xildhibaanada si looga doodo Mooshinkaan laga keenay Madaxweyne Waare.
Xildhibaanada ayaa xusay in Madaxwey ne Waare uusan waxba ka qaban dhibaat ooyinka jira degaanada maamulka Hirshab eelle, islamarkaana inta badan xildhibaana da uu Wasiiro ka dhigay si aan xilka looga qaadin.
Dowladda Soomaliya ayay sheegeen in ay faragalin ku heyso Mooshinka laga Gudbi yay Madaxweyne Waare, islamarkaana waf di ka socda ay soo gaareen Magaalada Jow har. Waxa ay sidoo kale sheegeen in uu lun saday xuquuqdii loogu tala galay Xildhib aanada maamulka Hirshabeelle.
Dib u dhac ayaa ku yimid ku dhawaaq ista Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug sidda ay xaqiijiyeen xubno ka mid ah Guddiga doorashooyinka maamulka Gal mudug.Waa markii labaad ee uu Fashilmo Jadwalka ay soo saareen Guddiga doorash ooyinka maamulka Galmudug.
Ilo Wareegyo ku sugan Dhuusamareeb ayaa Risaala u xaqiijiyay in Ra’iisul Wasaara ha Soomaaliya uu ku howlan yahay sidii loo xalin lahaa Khilaaf xooggan oo ka taagan soo xulista Xildhibaanada Galmudug.
Qaar ka mid ah beelaha degaanada maamu lka Galmudug ayaa horay walaac uga muuj isay Guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug. Waa markii 2-aad ee uu guddi gan ku fa shilmo dhowrista jadwalka doora shada, lam ana sida ay u fulin-doonaan hawl aha kale.iiyaga oo tacsi u direy dadkii ku dhi ntey.Xigashoradiorisaala.com
Kumanaan ku dibad-baxay safaaradda Mareykanka ee Iraq
Dhowr kun oo dibad-baxayaal ah ayaa Shalay isugu soo baxay banaanka safaarad da Mareykanka ee Baghdad, si ay u cambaa reeyeen duqeymo ay cii damada Mar eykanka la beegsadeen maleesh iyo Iran ay taageerto oo ku sugan dalalka Iraq iyo Syria.
Duqeymahaas oo dhacay Axaddii ayaa dhal iyey carro iyo cambaareyn ka timid saraaki isha sare ee Iraq, ha se yeeshee dowlad da Mareykanka ayaa difaacday ficilladee da, waxaana ay ka digtay inay mar kale wee rari doonto.
"Uma ogolaan doonno Iran inay ku baxs ato inay maleeshiyo hoos tagta u adeegstao inay ku weerarto danaha Mareykanka,” wax aa sidaas weriyayaasha u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka. Duqeymaha Mareykanka ayaa beegsaday baqaarada hubka iyo goobaha lo oga taliyo kooxda Kataeb Hezbollah ee da lka Iraq iyo Syria, waxaana ku dhintay 25 qof, ayada oo tobaneeyo kale ay ku dhaaw acmeen.
Saraakiisha Mareykanka waxay sheege en in duqeymaha ay jawab u ahaayeen gan taal lagu soo weeraray saldhig military oo Mareykanka uu ku leeyahay Iraq, kaasi oo lagu dilay qandaraasle Mareykan ah.
Saraakiisha waxay intaas ku dareen in caddeymaha la helay ay muujiyeen in shaki la’aan ay weerarka ka dambeysay kooxda Kataeb Hezbollah. R/W Iraq, Adel Abdul Ma hdi ayaa Isniintii cambaareeyey duqeymaha, waxaana bayaan uu soo saaray uu ka digay in ficillada Mareykanka ay yihiin kuwa aan la aqbali karin "oo yeelan doona caqaabih halis ah.”
Ciidamada DANAB Oo Shalay La Wareeg ay Deegaano Cusub
Guutada 16aad ee kumaandoosta Dan ab oo ka tirsan ciidanka xoogga Dalka ayaa Shalay gobalka shabeellaha Hoose ka fuliy ay Howl-gal ballaaran oo qorshihiisu ahaa in Al-shabaab looga xoreeyo deegaannada ay kaga sugan yihiin Gobolkaas.
Ciidanka kamaandoosta ayaa si buu xda Al-shabaab uga xoreeyay Tuulooyinka Moradiinle, Buula Miskiin, Macallinka, Bala dul Amiin, Raqayle, Sabriye iyo Buula Bashiir.Taliyaha Guutada 16aad ee Danab G.le Ismaaciil ayaa sheegay in 20 kamid ah Alshabaab lagu dilay intii uu socday howlga lka waa sida uu hadalka u dhigay.
Taliye Ismaaciil ayaa sheegay inay sii waday aal howl-gallada inta Al-shabaab laga saara yo dhammaan deegaannada ay sugan yihiin Gobolka Shabeellaha Hoose.